Thwebula FIFA 15 Ultimate Team 1.5.5 – Vessoft
Thwebula FIFA 15 Ultimate Team
FIFA 15 Ultimate Team – a popular football Simulator kusukela Electronic Arts. In the game kukhona okukhulu abadlali, amaqembu ehlukene, izinkundla edume kanye football League. FIFA 15 Ultimate Team ikuvumela ukudala ithimba lakho siqu futhi nokwenza abanekhono football abadlali squad yayo for game currency. Lo mdlalo kwenza ukusetshenziswa Dribbling, ukuqhuba esikhundleni abadlali futhi ahlele isitayela noma amaqhinga okufanayo. In FIFA 15 Ultimate Team kukhona ihluzo in izinga okusezingeni okuyinto izalana a movement yemvelo kanye namaqiniso abalingiswa. Management of FIFA 15 Ultimate Team Kwenziwa esebenzisa touch izinkinobho esisogwini emaphethelweni idivayisi kwesikrini futhi gamepads.
Ukukhetha Large abadlali, amaqembu kanye football League
Kwakha team yakho siqu
Uhlela amacebo a yemidlalo
Amahlelo ahlukahlukeneko management
Amazwana on FIFA 15 Ultimate Team:
FIFA 15 Ultimate Team Ahlobene software:
Imidlalo Isicelo olusemthethweni esitolo digital kusukela inkonzo ethandwa Ubisoft. In the isofthiwe kukhona ezihlukahlukene enkulu imidlalo okuyizinto kufinyeleleke thwebula.
Imidlalo I ukhululekile isofthiwe okunezinhlobonhlobo enkulu imikhiqizo yokudlala izinhlobonhlobo ezihlukene futhi intengo basukela international digital ukuhweba endaweni.
Imidlalo Umdlalo Ekwenza Umlingiswa lapho ungakwazi ukucinga bese ukubamba Pokemon emigwaqweni yasemadolobheni ngokusebenzisa ikhamera ye Smartphones. Umdlalo ine ikhono lokukhulumisana futhi ancintisane nabanye abadlali.
-Internet isiphequluli Fast kalula web ukuphequlula. Isofthiwe ngesivinini umthwalo page ngesikhathi uxhumano slow-inthanethi futhi kusindisa bandwidth.
English, Українська, Français, Español... Imgur 2.4.6.205
English, Afrikaans, Français, Español... Mindomo 3.0.15
Chat Imenenja okuphelele ukushintshanisa imiyalezo yombhalo phakathi kwabasebenzisi. Isofthiwe kwenza ukuxhumana in izingxoxo group and ukubuka okuqukethwe ehlukahlukene kwabezindaba.